Isabel Ge Mahe anova mukuru weChina kuApple | Ndinobva mac
Vakomana vanobva kuCupertino vachangobva kuzivisa kuti Isabel Ge Mahe, kusvika parizvino mutevedzeri wapurezidhendi weasina matekinoroji, achave maneja wepamusoro weApple kuChina, achitora chinzvimbo chitsva ichataura yakanangana nemusoro wekambani, Tim Cook naJeff Williams.
Isabel Ge Mahe anga achitungamira makore mapfumbamwe apfuura tungamira isina waya software software timu, chimwe chinhu chisinganzwisisike zvakanyanya kana Apple iri kutendeukira kune ese Intel neQualcomm kuti vape zvishandiso zvavo nemhando idzi dzekubatana.
Sezvakataurwa naTim Cook
Apple yakazvipira kuita mari nekukura muChina uye nekuda kwechiitiko chaIsabel nehutungamiriri hwake, ticharamba tichiita zvinhu zvikuru munyika. Isabel apedza makore mashoma apfuura kuApple achivandudza nekuvandudza kuti vabatsire vatengi muChina, uye isu tinomutarisira kuti ape mupiro mukuru munyika kubva zvino zvichienda mberi.
Sevamiririri vamutungamiriri weasina waya matekinoroji, Isabel akatarisa kuvandudzwa kweNFC, Wifi, bluetooth nenzvimbo matekinoroji eanenge ese zvigadzirwa zveApple, kuwedzera pakuve aive achitungamira zvikwata zvakasiyana zveinjiniya anga achitarisira Apple Pay, HomeKit uye CarPlay. Yakabatanawo zvakanyanya neakasiyana maR & D zvikwata kuti vakwanise tangisa yakatarwa iPhone uye iPad mamodheru eAsia kondinendi.
China yave iri inowedzera kukosha musika wekambani, kunyangwe munzvimbo dzichangoburwa dzekutengesa munyika, kunyanya kana tichitaura nezve iPhone, dzakadonha zvakanyanya nekuda kwekukwira kwemhando dzeChinese, dambudziko iro Isabel achasangana naro kuti awane zvakanakisa kubva kuma40 Apple Stores ayo Apple akavhura munyika, zvitoro zvakavhurwa mumakore maviri chete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Isabel Ge Mahe anova mukuru weChina kuApple
Pau Roige akadaro
Ichave Apple muChina! Kana kuti ndezvekuti hurumende yeChinese ine munhu anotarisira mukati meApple?
Pindura Pau Roige